गृहमन्त्री ,ओली र प्रचण्डका ‘यस म्यान’, के होला आईजिपी प्रकरण ? – www.agnijwala.com
गृहमन्त्री ,ओली र प्रचण्डका ‘यस म्यान’, के होला आईजिपी प्रकरण ?
काठमाडौं , १२ चैत– गृहमन्त्री भएपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र विवादरहित बनाउने भाषण ठोके । त्यतिमात्र होइन उनले नेपाल प्रहरीलाई विश्वकै नमुना बनाउनेसमेत उद्घोष गरे । तर, जब प्रहरी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने समय आएको छ तब भने उनी पछि हट्ने देखिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) प्रकाश अर्यालको कार्यकाल यही चैत २८ गते सकिँदै छ । योसँगै नयाँ आईजिपीका लागि लबिङ सुरु भएको छ । प्रहरीमा बरिष्ठता र कार्य क्षमताका आधारमा एक नम्बरमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्ष (एआईजी) आईजिपी बन्ने परम्परा छ । तर, अहिले एआईजी कोही छैनन् । त्यसैले डिआईजीबाट आईजिपी बन्ने निश्चित छ । हाल एक नम्बरमा डिआईजी सर्वेन्द्र खनाल छन् । उनले अहिले महानगरिक ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सम्हालिरहेका छन् । र, उनी एक सफल, सक्षम र कुशल व्यक्तित्व पनि हुन् । तर, उनी आईजिपीमा बढुवा हुने सम्भावना निकै कम छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नजरमा रमेश खरेल छन् । जो दोस्रो नम्बरमा छन् । उनको कार्यशैली पनि हालसम्म विवादीत त छैन तर, प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दाउँपेचको भाँडो बनाउने कि स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा राख्ने भन्ने प्रश्न अवश्य उठ्नेछ । किनकी गृहमन्त्री बादलले ओली र प्रचण्डको ‘यास म्यान’ बन्ने संकेत दिइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अग्निज्वाला .कम लाई भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले कुनै हस्तक्षेप गर्ने देखिएन । प्रधानमन्त्रीले जसलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यसमा उहाँको कुनै आपत्ति हुने अवस्था अहिलेसम्म मैले देखेको छैन ।’ गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै आलोचित हुँदै आएका गृहमन्त्री आईजिपी प्रकरणमा थप आलोचनाको घेरामा पर्ने प्रष्ट छ ।
पूर्वडिआईजी नवराज सिलवाल प्रकरणपछि प्रहरीमा रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप छताछुल्ल भएको थियो । र, अब यसले निरन्तरता पाउने संकेत देखिइसकेको छ ।
xreloadномер баланса мтс